नेटफ्लिक्स लोगोको इतिहास | अनलाइन क्रिएटिभहरू
Netflix लोगो को इतिहास
नेटफ्लिक्स लोगोको स्रोत फोटो इतिहास: Tentulogo
के तपाईलाई लाग्छ कि Netflix लोगो सधैं यस्तो भएको छ? ठीक छ, सत्य यो हो कि होइन, यस प्रसिद्ध स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म अन्तर्गत नेटफ्लिक्स लोगोको सम्पूर्ण इतिहास छ जुन तपाईंलाई थाहा नहुन सक्छ।
त्यसैले हामीले तपाईंलाई सम्झाउने निर्णय गरेका छौं (किनकि यो धेरै पुरानो छ) र तपाईंलाई ती समयहरू सम्झाउने निर्णय गरेका छौं कि यसले यसको लोगो परिवर्तन गरेको छ र तपाईंलाई थाहा थिएन। निस्सन्देह, यसमा केवल3परिवर्तनहरू छन्, ती मध्ये एक धेरै महत्त्वपूर्ण छ। तपाई कुन जान्न चाहनुहुन्छ?
1 Netflix लोगो को इतिहास
1.1 नयाँ Netflix लोगो
1.2 2014, परिवर्तन को वर्ष र डबल लोगो को आगमन
2 संगीत नेटफ्लिक्स लोगो को इतिहास
जाहिर छ, नेटफ्लिक्स लोगोको इतिहास यस मनोरञ्जन सेवाको विकाससँग सम्बन्धित छ। तर कमैलाई Netflix को उत्पत्ति थाहा छ, वा किन यो कम्पनीको दर्शन बुझ्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
यस अवस्थामा, नेटफ्लिक्सको जन्म 1997 मा भएको थियो। यसका आमाबुवा, सिर्जनाकर्ता र साझेदारहरू मार्क बर्नेस रान्डोल्फ र विल्मोट रीड हेस्टिङ्स जूनियर थिए, दुवै क्यालिफोर्नियाका थिए।
तिनीहरू भिडियो भाडा व्यवसायमा केन्द्रित थिए, त्यो समयमा अवस्थित विशिष्ट भिडियो स्टोरहरू। तर अलिकति भिन्नता संग। र यो हो कि यो पसलमा जानु पर्ने ग्राहकहरू हुनुको सट्टा, तिनीहरूले अर्डर लिएका थिए वा तिनीहरूलाई मेल मार्फत पठाएका थिए। अर्को शब्दमा, यो मेल द्वारा अनलाइन भिडियो वा DVD भाडा थियो।
जीवनको एक वर्ष पछि, तिनीहरूसँग काम गर्न 30 जना कामदारहरू र एक हजार भन्दा कम डीभिडीहरू थिए। तर त्यस मितिदेखि उनको सफलता यतिसम्म बढ्न थाल्यो कि यो धेरै छिटो बढ्यो।
त्यो कम्पनीको नाम ? नेटफ्लिक्स। र जाहिर छ, तिनीहरूको लोगो पनि तिनीहरूले गरेको कामको प्रतिबिम्ब थियो, तर सत्य यो हो कि यो हामीले यसलाई अहिले देखेको भन्दा धेरै फरक थियो।
सुरुमा, लोगो कालो थियो, सामान्य अक्षरहरूसँग। र अलग भयो। यसले एकातिर नेट पढ्छ, र अर्कोतिर फ्लिक्स। साथै, N र F दुवै बाँकी अक्षरहरू भन्दा थोरै ठूला थिए।
र के शब्द अलग भयो? खैर, एउटा टेप जसले कालो र बैजनी रेखाहरूसँग चलचित्र रिलको नक्कल गर्यो।
३ वर्षसम्म उनले यो लोगो राखे ।3को आगमन संग, त्यहाँ अनुहार परिवर्तन भएको थियो।
नयाँ Netflix लोगो
सन् २००० ले शताब्दीको परिवर्तन मात्र ल्याएन, नेटफ्लिक्सको लागि, जसले आफूलाई बढ्दो प्रख्यात कम्पनीको रूपमा स्थापित गर्न थालेको थियो, यसले लोगोमा पनि परिवर्तन ल्यायो। निस्सन्देह, पहिलो मात्र केहि महिना सम्म चल्यो, यो लगभग पूर्ण रूपमा गायब भयो र यसको बारेमा धेरै कम थाहा छ।
Netflix लोगोको इतिहास अब अर्कोमा परिवर्तन हुन्छ, त्यो पहिलोलाई पछाडि छोडेर रातो पृष्ठभूमि भएको एउटाले प्रतिस्थापन गर्दछ। माथि, पुरानो सिनेमास्कोपको प्रविधिबाट बनाइएका अक्षरहरू, सेतो र कालो आउटलाइनले घेरिएको छ जसले थ्रीडी प्रभाव सिर्जना गरी स्क्रिनबाट बाहिर निस्कन्छ भन्ने अनुकरण गर्दछ। टाइपोग्राफी र रङ दुवै परिवर्तन हुन्छ।
र यो हो कि तिनीहरू अक्षरहरूमा कालोबाट सेतो र पृष्ठभूमिमा सेतोबाट रातोमा जान्छन्। अक्षरहरू सेन्स सेरिफ हुन्, अर्थात्, कुनै पनि प्रकारको फलिफाप वा सुरुचिपूर्ण अन्त्य बिना, सबै समान आकारमा, तर कम चापमा थोरै आर्केड।
नेत्रहीन रूपमा, विशेष गरी जब तपाइँ लोगोमा हेर्नुहुन्छ, तिनीहरू छायाको कालो किनाराको प्रभावको कारणले चलिरहेको देखिन्छ, जसले तिनीहरूलाई डिजाइनबाट अलग बनाउँछ।
उनीहरूलाई यो लोगो यति मन पर्यो कि कम्पनीले यसलाई 14 वर्षसम्म राख्यो, जबसम्म 2014 मा फेरि परिवर्तन गर्ने निर्णय भयो।
2014, परिवर्तन को वर्ष र डबल लोगो को आगमन
2014 मा कम्पनीले निर्णय गर्यो कि यो विश्वव्यापी परिवर्तनको लागि समय हो। र यसका लागि, उनीहरूले न्यु योर्कको डिजाइन कम्पनी ग्रेटेलको कामलाई विश्वास गरे जसले उनीहरूलाई अमेरिकामा मात्र नभई विश्वभरि बलियो रूपमा उभरिरहेको कम्पनीको लागि नयाँ ब्रान्ड छवि डिजाइन गर्न नेतृत्व गर्यो।
अनि तिनीहरूले के गरे? शुरुवातका लागि, तिनीहरूले रातो पृष्ठभूमि हटाए, र यसलाई सेतो बनाए। तर त्यो रातो कम्पनीको नाम नेटफ्लिक्स राख्न प्रयोग गरिएको थियो। तिनीहरूले छायाँ र अक्षरको किनारहरू पनि हटाए जसले शब्दहरूलाई अलग बनायो। र जब तिनीहरूले त्यो सानो arcing तिरछा राखे, तिनीहरूले यसलाई नरम बनाए, वा कम से कम छाया र किनाराहरू हटाएर यो कम प्रभाव देखिन्थ्यो।
यो अघिल्लो लोगोबाट धेरै परिवर्तन भएन, तर तिनीहरूले यो सिर्जना गर्न सबै मर्ज गरे।
2016 मा, नयाँ लोगोको दुई वर्ष पछि, डबल लोगो आयो। र यो हो कि, सानो लोगो को आवश्यकता को कारण, आवेदन को लागी, मोबाइल फोन, ट्याब्लेट, आदि को लागी। उनीहरूलाई केहि चाहिन्छ जुन लाइनमा रह्यो तर पढ्न सकिने थियो। र स्पष्ट रूपमा नेटफ्लिक्स शब्द आइकन वा एप लोगोको रूपमा बाहिर खडा हुन धेरै ठूलो थियो।
यसरी जन्मियो दोस्रो लोगो, जुन तपाईको मोबाइलमा पक्कै छ। तिनीहरूले के गरे N मा मात्र ध्यान केन्द्रित गरे। तर लोगोको N होइन, तर तिनीहरूले यसलाई वास्तविक रूपमा सिर्जना गरे र यदि तपाईंले अलिकति हेर्नुभयो भने तपाईंले देख्नुहुनेछ कि यो एउटा धनु जस्तो देखिन्छ जुन आफैमा जोडिएको छ जुन N अक्षर सिर्जना गर्दछ। तिनीहरूले यसलाई कसरी आविष्कार गरे।
यसलाई अलग बनाउनको लागि, यो सेतो हुन सक्दैन, किनकि यसले रंगलाई धेरै "खान्छ" र आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्दैन, त्यसैले तिनीहरूले कालो रोजे र धनुको रातो आफैं कालो हुन्छ मानौं कि छेउको स्टिकहरू। धनुको पछाडि र सही पक्ष पार गर्ने।
संगीत नेटफ्लिक्स लोगो को इतिहास
यदि तपाईंले नेटफ्लिक्समा प्रवेश गर्नुभएको छ र प्लेटफर्ममा कुनै पनि मौलिक चलचित्र वा शृङ्खला हेर्नुभएको छ भने, तपाईंले थाहा पाउनुहुनेछ कि सबैभन्दा पहिले तिनीहरू कम्पनीको लोगोसँग थोरै संगीत बजाउँछन्। याद छ?
ठिक छ, तपाईलाई थाहा हुनुपर्दछ कि यो ध्वनि लोगो हान्स जिम्मर द्वारा बनाईएको हो, एक प्रसिद्ध संगीतकार जसले धेरै संगीत पुरस्कारहरू जितेका छन्। हामीले पहिले बोलेको N लाई संगीत र एनिमेटरहरू दुवैद्वारा एनिमेसन गर्ने, त्यो शृङ्खला वा चलचित्र हेर्न जानेहरूका लागि यो एक किसिमको चेतावनी हो भनेर उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। जसरी थिएटरहरूमा भएको थियो, अन्य चलचित्रहरूको घोषणा र ट्रेलर पछि, एकमा राखिएको थियो कि उनीहरू के हेर्न गएका थिए सुरु भयो।
विशेष रूपमा, लोगोलाई ०.४ सेकेन्डबाट ०.१७ सेकेन्डमा विस्तार गरिएको थियो। थोरै समय, तर हामी सबैले यसलाई पूरा देख्नेछौं। र हामीले सुन्नेछौं।
अब तपाईलाई Netflix लोगोको इतिहास थाहा छ, तपाईले पक्कै पनि यसलाई फरक रूपमा देख्नुहुनेछ। तपाईलाई कुन लोगो धेरै मन पर्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » प्रेरणा » Netflix लोगो को इतिहास
Lacoste लोगो को इतिहास
शीर्षकका लागि टाइपफेसहरू